Naya Post Nepal | यौनसम्पर्कपछि तुरुन्तै पिसाब फेर्न किन आवश्यक हुन्छ ? महिलाहरूलाई विशेष सुझाव (भिडियो सहित)
यौनसम्पर्कपछि तुरुन्तै पिसाब फेर्न किन आवश्यक हुन्छ ? महिलाहरूलाई विशेष सुझाव (भिडियो सहित)
एजेन्सी । आफ्नो पार्टनरसँग शारीरिक सम्बन्ध निर्माण गर्दा आफ्नो घनिष्ठ सरसफाइको ख्याल गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईंले घनिष्ठ सरसफाइमा ध्यान दिनुभएन भने, तपाईंले धेरै स’म’स्या”हरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
शारीरिक स म्ब न्ध राख्नु स्वास्थ्यका लागि स्वस्थ्य मानिन्छ । तर त्यस पछि गरिएका केही गल्तीले तपाईको स्वास्थ्यलाई हा”नि पुर्‍याउन सक्छ। धेरै मानिसहरु यौ”न’सम्पर्क गरेपछि तुरुन्तै सु’त्छन् । जुन तपाईको लागि निकै हा¥नि¥का रक साबित हुन सक्छ ।
यौ¥’न’सम्पर्कपछि पिसाब फेर्नु निकै जरुरी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आउनुस् यसको पछाडिको कारण के हो थाहा पाउनुहोस् । आउनुहोस् हामी तपाईलाई बताउँछौँ कि यौ’न’सम्पर्कपछि पि साब पास गर्नु किन आवश्यक हुन्छ ।
यौ’न’सम्पर्कपछि पिसाब किन जानुपर्छ ? बाँकी जानकारी भिडियोमा हेर्नुहोला :-
२०७८ फाल्गुन १९, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 2287 Views